Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Dan Rayburn | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Dan Rayburn
Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Dan Rayburn
Beeraha Broadcast Beat's “2019 NAB Show Profile-yada New York ”waa wareysiyo taxane ah oo lala yeelanayo aqoonyahanno caan ah oo ka tirsan wax soo saarka kuwaa oo kaqeyb gali doona NAB Show New York (Oktoobar 16-17, 2019).
Dan Rayburn guud ahaan waxaa loo arkaa inuu yahay khabiirka ugu weyn ee warfaafinta baahinta ku qulqulaya warbaahinta iyo fiidiyaha on-line. Waxaan dhawaan helay fursad aan ku wareysto Rayburn, khibraduna waxay ahayd aasaas koorsada burburka ee warshadaha socodka iyo mustaqbalkeeda.
Bilowga wareysiga, Rayburn wuxuu saxay mala awaalkeyga inuu ku bilaabi lahaa bilowgiisa baahinta. Wuxuu yiri, "kama imid warshadaha warfaafinta," ayuu yiri, "laakiin waa warshadeynta dayactirka kumbuyuutarka, waxaanan ku bilaabay qulqulka tikniyoolajiyada warbaahinta runtii si kadis ah. Ka dib markii aan ku soo biiray millatariga, waxaan u baxay oo noqday injineer nidaam shahaay u leh alaabada Apple. Waxaan mas'uul ka ahaa inaan goobta u aado macaamiisha goobaha NYC si aan u dayactiro aaladda Apple-ku saleysan oo ay Apple hoos imaan jirtay. Waqti isku mid ah, 1995, Apple waxay kafaaloqaadday dhacdo la yiraahdo Macintosh New Festival Music [arag sawirka kore], kaasoo ahaa hordhacdeydii ugu horeysay multimedia shabakadda. Dhacdadan ayaa ka koobnayd ilaa iyo toban naadi oo ka kala socday NYC wre si ay muusig ugu keydiyaan muusig mudo dhan maalmo badan webka. 1996, oo leh moodooyin 14.4 ah oo baahsan iyo teknoolojiyadda warbaahinta ka socota RealNetworks- kobciso Shabakadaha Horusocodka — ee awood u leh soosaaridda durdurinta codka maqalka waqtiga dhow, munaasabaddu waxay ku dhowaatay laba ku dhawaad ​​laba naadi oo fiilooyin ah, oo baahinaya xirmooyin 300 muddo ka badan 5-maalin. Taasi waxay ii ahayd horudhacdaydii ugu horreysay ee fikradda ah inaan u soo bandhigo nuxurka waqtiga-dhabta ah isticmaaleyaasha websaydhka, waxaanan u maleynayay inay tahay mustaqbalka muusikada. Marka waan iska daayay hagaajinta qalabka Apple waxaanan gacan ka geystey helitaanka shirkad soo saarta webka tooska ah. ”
"Sida ganacsi walba, yoolalka iyo caqabadaha ayaa isbedelaya waqti ka dib, kuna saleysan darawalada suuqa iyo xakamaynta. Markii aan la aasaasay Live Line, fiidiyowgu ma jirin, qofna ma lahayn Broadband, mana jirin wax alaabo iyo adeegyo shelf ah oo karti u siiyay baahinta websaydhka. Runtii waxay ahayd farshaxan iyo xirfad si ay awood ugu yeelato inaad ku dhex gasho tooska websaydhka isla markaana aad u wada dhejiso. Maanta, qofna runtii kama fikiro waxbadan maadaama tikniyoolajiyaddu ay sidaa u fiican tahay, la awoodi karo, oo ay fududahay in la isticmaalo. Iyadoo la adeegsanayo Globix, taasi waxay ahayd xilliga 1998-2002 waqtiga markii fiidiyowgu runtii ku qarxay shabakadda, dad badani waxay bilaabeen inay helaan isku xirnaanta DSL, iyo qulqulka fiidiyowga ayaa runtii la xiray. Iyadoo StreamingMedia.com, taasi waxay ahayd shirkad warbaahineed, sidaa darteed yoolka halkaa ka jira wuxuu ahaa si fudud oo loo wacyi geliyo suuqa. Caqabadda ayaa had iyo jeer ah in la hubiyo in aad ogtahay adeegyada ay u baahan tahay warshadaha, sida ay u doonayaan macluumaadka macaamiisha iyo nooca ay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan iyaga.
Waqtigan xaadirka ah, waa inaan qirtaa in badan oo ka mid ah su'aalaha xigey ee aan weydiiyay Rayburn waxay ahaayeen arrimo kusaabsan qulqulka socodka oo aan shaqsiyan wax ka ogaan lahaa. Tusaale ahaan, waxaan weydiiyay hadii qulqulka aakhirka uu kaabi doono baahinta warfaafinta dhaqanka. Oo isna wuxuu ugu jawaabay, Midkoodna midka kale ma sarreeyaan, ayuu midba midka kale u mahadnaqaa. Labada qalab dhexe ee gudbinta fiidiyoowga loo adeegsado ayaa jiri doona. Waxay ku saabsan tahay adeegsiga tikniyoolajiyadda saxda ah si loogu gudbiyo fiidiyoowga saxda ah, adeegsadaha saxda ah, aaladda saxda ah, oo leh tayada qibradeedka saxda ah. Mid ka mid ah tikniyoolajiyaddu waligeed ma barakiciso mid kale. Fikradda beddelka la soo jeediyay ayaa had iyo jeer ka xiiso badan kan dhabta ah ee xallinta xalka la adeegsanayo.
Waan ku qanacsanahay inaan barto taas, in kasta oo aan ka mid ahay horyaallada ugu weyn ee warbaahinta qulqulaya, Rayburn ma iibsan doono khuraafaadka ah in qulqulka aakhirka uu u baahin doono warbaahinta jir ahaaneed ee ka jirta aficionados filimka caadiga ah iyo TV-ga. Runtii, markii aan weydiiyey haddii labada waran-wade ay sii wadayaan wada-noolaanshaha, jawaabta Rayburn waxay ahayd mid aan sinnayn. “Gabi ahaanba. Macaamiisha ayaa leh baahiyo kala duwan oo dhadhan leh xulashooyinka tusmada iyo sida ay u isticmaalaan. Qaar ahaan, waxay rabaan warbaahinta jirka waxayna soo bandhigtaa tayada ugu fiican. Kuwa kale waxay ku farxi lahaayeen tayada tayada si loogu haboonaado. Moodhadhka ganacsiguna dhamaantood way ka duwan yihiin kuwa bilaashka ah (AVOD), isdiiwaangalinta (SVOD), bixinta kirada, bixinta lacagta (iska soo dejista dhijitaalka) iyo warbaahinta jirka. Ma jiro hal cabir oo ku habboon dhammaan macaamiil kasta oo xulashoduna waa shey wanaagsan.
Waxaan markaa weydiiyay Rayburn haddii uu arkay shirkad kasta oo cusub oo siineysa hagitaanno heer sare ah oo heer sare ah sida Netflix, Amazon Prime, iyo Hulu, tartan kasta oo culus mustaqbalka. “Markaad dhahdo 'tartan,' adeegyo badan ayaan runtii tartamin. Qaarkood waa qulqulka tooska ah, qaar waa uun dalab, qaarna waa labadaba. Qaarkood waxay si aad ah diirada u saaraan waxyaabaha qoyska ka kooban, kuwa kale asalka iyo kuwa kale oo bartilmaamed ka ah ciyaaraha. Laakiin kuwa isha ku haya waa Disney +, Apple TV +, NBC, HBO Max, iyo Quibi. Dhammaantood waxay leeyihiin jeeb-qoto dheer, doollar suuq-geyn oo weyn oo ay ku isticmaali karaan iyo siyaabo badan oo kor loogu qaado adeegyadooda.
Isaga oo ka hadlaya sidii loogu ballanqaaday dadka cusub ee ku soo kordhaya warshadaha qulqulka, waxaan weydiiyay Rayburn waxa ay u maleynayaan inay yihiin fursadaha loogu guuleysto adeegyada qulqulka soo socda ee ay sameynayaan Disney iyo Warner Brothers, iyo haddii ay wareyso Warner Brothers ay ka fogaan karto guuldarradooda adeegga Warners Instant Archives. “Taasi runtii maahan isbarbardhig cadaalad ah oo ka dhexeeya adeegyada,” ayuu igu yiri. “Adeegga Instant Archives wuxuu ahaa isku dhaf filimyo, showyo TV ah, iyo filimo TV-ga laga sameeyey oo laga soo qaatay maktabadda Warner Brothers. Ma ahayn macaamiisha cusub ee macaamiisha ay raadinayeen, waxaana kaliya laga heli karaa Roku iyo bog furayaasha. Digniinta waxaa iska leh AT&T adeegga cusub ee loo yaqaan HBO Max waxaa ku jiri doona 10,000 saacadood oo ka mid ah waxyaabaha lacagta laga helo. Waxay u sabab tahay bilaabida guga 2020, wali garan mayno sicirka wali, laakiin adeega, oo lagu taageerayo AT&T oo ka kooban HBO, waxay lahaan doontaa macaamiisha waxyaabaha ka kooban ay rabaan inay daawadaan. ”
Per waxa caado ka noqotay dhaqanka NAB Show iyo NAB Show Magaalada New York, Rayburn wuxuu soo bandhigi doonaa “Shirkiisii ​​Streaming” labada maalmood ee dhacdada Oktoobar ee soo socota. "Waxaan bilaabay iskaashigeyga NAB soosaarida shir-galka Streaming cusub bandhigyadooda Las Vegas iyo Magaalada New York ee 2018. Bandhigga ayaa muujinaya kuwa ku hadla 100 muddo laba maalmood ah oo leh laba raad oo leh saf ballaaran oo loogu talagalay kuwa ku hadla iyo soo-bandhigayaasha sida CBS, Amazon, Hulu, NBC, WarnerMedia / HBO, Sling TV, FOX Sports, Disney, NFL iwm. Shaqadeyda ayaa ah inaan soo saaro waxyaabo aad u wanaagsan oo ka caawinaya waxbarida, wacyigalinta iyo xoojinta idaacadaha, daabacayaasha, aaladaha OTT, xayeysiiyaasha iyo kuwa kale ee moodooyinka monetization-ka iyo teknolojiyadda OTT.
“Dakhliga caalamiga ah ee OTT wuxuu gaari doonaa $ 129 bilyan 2023. Ama iyada oo loo marayo xayeysiinta (AVOD), macaamilyada (TVOD), ama isdiiwaangalinta (SVOD), xulashada ikhtiyaarka saxda ah ee lacag-ururinta iyo barashada sida loogu guuleysto in looga hirgaliyo aalado badan, bay'ada nidaamka wadashaqaynta webka ayaa caqabad ku ah. Bandhigu wuxuu barayaa kaqeybgalayaashu sida looga faa iideysto sadaqada tooska ah ee macaamiisha (DTC) loona maqlo sida qaar ka mid ah shirkadaha ugu waa weyn adduunka ay ula xisaabtamayaan maktabadda fiidiyooga ayna u dhisaan xiriir astaan ​​u ah macaamiishooda. Isla mar ahaantaana, macaamiisha ayaa filanaya tayada ugu wanaagsan ee fiidiyowga aaladooda iyo TV-yada meel kasta, waqti kasta. Nidaamyada OTT iyo warbaahinnada ayaa sii wada loolan adag isla markaana waxay si isdaba joog ah u wanaajinayaan qulqulka muuqaalkooda fiidiyoowga ah si ay u siiso dhagaystayaasheeda khibradda daawada ee ugu wanaagsan. Marka waxaan ka hadlaynaa wax walba oo ay u baahan yihiin inay ka ogaadaan wax ku saabsan baakadaha, transcoding, maamulka warbaahinta, playback, iwm, dhammaantoodna waxay ka yimaadaan khubaro hogaamineysa warshadaha. ”
Waxaan ku soo gabagabeeyey wareysigeyga Rayburn anigoo weydiinaya waxa qorshihiisa mustaqbalku yahay. Jawaabtiisu waxay muujisay dabeecadiisa la jeclaan karo. “Shaqadaydu waa inaan la wadaago macluumaadka, ha ahaato barteyda blog-keeda, shaqsi ahaan bandhigyada, xubnaha warbaahinta, TV-ga wareysiyada, iwm., Sidaa darteed marwalba waxaan isku dayayaa inaan ka warqabo fursadaha ka gudbaya jidkeyga oggol. aniga inaan taas u sameeyo si ka sii wanaagsan. Waa sababta aan ugu liis garaaco nambarkayga taleefanka gacantayda bogga gurigayga ku yaal (917-523-4562), oo waxaan uga jawaabayaa dhammaan wicitaannada. Waligiin ma ogaan kartid cidda aad lahadli doontid, fursadaha ay soo bandhigaan ama siyaabaha aad u caawin karto kuwa kale, taas oo iyaduna ka caawinaysa guud ahaan warshadaha inay koraan. ”
Doug Krentzlin waa actor, qoraa, iyo taariikhyahanka filimka & TV-ga ee ku noolaa Spring Spring, MD oo leh bisad Panther iyo Miss Kitty.
RIP, Buck Henry: Mahadcelin - January 10, 2020
Gobolka cusub ee Farshaxanka: Digital Comm Link's Digicaster SoloCam - December 11, 2019
Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Mike Baldassari - October 18, 2019
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Idaacadan Convention Broadcasting Convention NAB 2015 NAB 2016 NAB Show NAB Show 2016 xirfadaha show NAB NAB Show Las Vegas NAB Show Diiwaangelinta NAB16 nabshow National Association of warbaahinta Show Post Production Adduunka sprockit Video Engineer	2019-10-04
Previous: Broadcast Pix wuxuu dooranayaa Muuqaallo 'Muuqaalka' 'Medialooks MFormats iyo WebRTC' si uu awood ugu yeesho jiilka xiga ee xalalka fog fog
Next: Sawir qaade & Video-ga